बसमा यात्रा गरिरहेका ४५ यात्रुले कसरी थाहा पाएनन् ?गुडिरहेको बसभित्रै बलात्कार ! – News Nepali Dainik
बसमा यात्रा गरिरहेका ४५ यात्रुले कसरी थाहा पाएनन् ?गुडिरहेको बसभित्रै बलात्कार !
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ १७, २०७७ समय: ८:१२:२६
*** ४५ जना यात्रु लिएर गुडिरहेको बसभित्र एक महिला बलात्कृत हुँदा त्यही बसमा यात्रा गरिरहेका कुनै पनि यात्रुले थाहा पाएनन् । झट्ट सुन्दा अनौठो लाग्ने यो घटना साँचो हो । महिलाले आफू बलात्कृत भएको भनेर प्रहरीमा उजुरी दिएपछि बसमा यात्रा गर्ने यात्रुसँग प्रहरीले सोधपुछ गर्दा यात्रुले यही बयान दिएका छन् । बसमा ४५ जना यात्रु थिए जसले घटनाको समयमा आफूहरु निदाइरहेको बयान दिएका छन् । टाइम्स अफ इण्डियाको समाचार अनुसार बलात्कृत महिला दिल्लीकी हुन् ।
समाचारका अनुसार दिल्ली जाँदै गरेको बसमा ती पीडित महिला पनि लखनउबाट दिल्ली जाँदै थिइन् । शुक्रबार बेलुकी करिब ७ बजे गोंडा भन्ने ठाउँबाट अर्को बसका सहचालक रवि गुप्ता पनि त्यो बसमा चढेका थिए । ‘बिहान सबेरै धेरै हल्ला भएपछि म बिउँझिएँ । म यात्रुहरुको सिट भएतर्फ गएँ र एक महिलाले रविलाई कुटिरहेको देखें’ बसका २ जना ड्राइभरमध्येका एक इन्द्रपालले भने । यो घटनाको समयमा इन्द्रपालले अर्का ड्राइभर शिवराजलाई गाडी चलाउन दिएर आफू सुतेका थिए ।
महिलाले आकस्मिक हेल्पलाइनमा फोन गरिन् र पुलिसलाई आफू बसमा बलात्कृत भएको बताइन् । ‘यो मन्त टोल प्लाजा नजिकै बिहान करिब साढे ५ बजेतिर भएको थियो’ एसपी रुरल शिरिष चन्द्राले भने । बसले माइलस्टोन ६५ पार गरेपछि पुलिसले बसलाई भेट्टाएर रोकेको थियो । महिलाको उजुरीको आधारमा पुलिसले बलात्कारको अभियोगमा रविविरुद्ध एफआइआर दर्ता गरेको समाचारमा जनाइएको छ ।
‘म लखनउबाट दिल्ली जानको लागि डबल डेकर बसमा चढेकी थिएँ । कुनै ठाउँमा रवि बसमा चढ्यो । म पस्लपर सिटमा निदाइरहेकी थिएँ जतिबेला सवि जबरजस्ती मसँग आयो, मेरो कपडा च्यातिदियो र मलाई बलात्कार गर्यो । त्यतिबेला बसमा ४५ जना यात्रु थिए’ महिलाको उजुरीमा लेखिएको छ । एसपीले यात्रुहरु सबै निदाएको र उनीहरुले होहल्ला सुनेपछि मात्र उठेको बताए ।
रवि गुप्तालाई यसबारे सोध्दा उनले भने महिलाको सबै बयान झुटो भएको बताएका छन् । बहराइचका स्थायी बासिन्दा रविले भने यो यौनकार्य आग्रह र सहमतिमा भएको बताएका छन् । सहमति भएको रकममा कुरा नमिलेपछि मात्रै होहल्ला भएको उनले दावी गरेका छन् । गुप्तालाई पक्राउ गरेर अदालतमा उपस्थित गराइएको छ र महिलालाई मेडिकल जाँचको लागि लगिएको छ ।
Last Updated on: January 30th, 2021 at 8:12 am
१८०८ पटक हेरिएको